IBitpanda -Funda ukuRhweba oku-2
Khuphela abaThengisi beNkanyezi kwiMT4
$ / € / £ 25 IComposit
IBitpanda yinkampani ehamba phambili ye-fintech ezinze eVienna, e-Austria.
IComposit $ / € / £ 25
Trading Platform Iplatifomu yokuRhweba kwiWebhu
Inani leeasethi 30
Iindidi zeeasethi i-cryptocurrencies
IBitpanda yinkampani ehamba phambili ye-fintech ezinze eVienna, e-Austria. Inkampani ibonelela ngeseti yeemveliso ezixhobisa abantu ukuba bathenge kwaye bagcine ii-asethi zedijithali, ukuhlawulela iimpahla kunye neenkonzo, ukurhweba ngesinyithi esixabisekileyo, kunye nokutshintshiselana ngeeasethi zedijithali. IBitpanda, ephantsi kolawulo kunye nokulawulwa komlawuli wezemali waseVienna, inabathengi abangaphezulu kwesigidi kwihlabathi liphela. Ikwanabasebenzi abangaphezulu kwe-130.
IBitpanda yaqalwa ngo-2014 nguChristian Turner, uPaul Klanschek, kunye noChristian Trummer. Inkampani inayo khuliswe ngaphezulu kwe- $ 43 yezigidi nge-Initial Exchange Offering (IEO). Inkampani yayisaziwa njengeCoimal.
Izibonelelo zeBitpanda kunye neNgxaki
Kwihlabathi eligcwele ukutshintshiselana okungenakubalwa, iBitpanda yenze iqonga elizibeka lodwa. Inkampani inezibonelelo zilandelayo:
Abasebenzisi abangaphezu kwesigidi.
Izinto ezinomdla kwiwebhu kunye nezicelo eziphathwayo.
Ukhuseleko. Inkampani ityale imali ukwenza iqonga layo likhuseleke ngakumbi.
Imfundo-Inkampani inezibuko lemfundo apho ibonelela ngoqeqesho kubathengi.
Kulula ukuyisebenzisa -I-Bitpanda ibonelela ngeqonga ekulula ukulisebenzisa elifikelelekayo kubasebenzisi kwihlabathi liphela.
Iinkonzo ezongezelelweyo -Ngokungafani nolunye utshintsho, iBitpanda ibonelela ngeenkonzo ezongezelelweyo ezinje ngesinyithi kunye nokonga
Ukungabonakali- iBitpanda inikezele ngolwazi oluninzi malunga nenkampani.
Multiplatform -Bitpanda iyafumaneka kwiwebhu kunye nakwiisoftware.
Iqonga lokurhweba linokuba nzima kubaqalayo.
Imirhumo ingaphakama kunabanye abathengisi.
Ngokungafaniyo nolunye utshintsho kwi-Intanethi, iBitpanda ibonelela ngenani leemveliso kunye neenkonzo. Zonke ezi mveliso zinceda inkampani ukuba yenze i-ecosystem apho abasebenzisi banokufumana zonke izixhobo abazifunayo. Inkampani ibonelela ngezi mveliso zilandelayo:
Intlawulo yeBitpanda- iBitpanda Pay yimveliso eyenza ukuba abasebenzisi bahlawule amatyala abo kwaye bathumele imali. Abasebenzisi banokuhlawula basebenzise imali ye-fiat okanye basebenzise i-cryptocurrensets.
Ugcino lweBitpanda -Le yimveliso eyenza ukuba abasebenzisi bakwazi ukugcina imali. Abasebenzisi banokugcina imali nge-euro, iidola zaseMelika, iFranc yaseSwitzerland, kunye ne-sterling. Unokwenza izicwangciso ezininzi ngaphakathi kwendalo.
Izitye zeBitpanda -Le yimveliso evumela abasebenzisi ukuba bathenge isinyithi esixabisekileyo njengegolide, iplatinam kunye nepalladium. Isinyithi sigcinwa kwindawo yokugcina yaseSwitzerland.
Ukutshintshwa kweBitpanda -Le yimveliso evumela abasebenzisi ukuba batshintshe iiasethi zedijithali kwangoko. Umzekelo, unokuguqula i-Bitcoin yakho ibe yi-Ethereum.
IBitpanda Ukuya -Le yimveliso efumaneka ngaphezulu kwamasebe eposti angama-400 nangaphezulu kwamaqabane eposi ayi-1,400. Ama-Austrian anokuthenga i-crypto ngemali kula masebe.
IBitpanda Plus -Le yimveliso ebonelela abasebenzisi ukuba bandise imida yabo xa bethenga i-crypto. Ukongeza, iBitpanda kunye yenza ukuba abathengi bakwazi ukuthenga i-crypto ekhawuntarini.
Ukudibana neBitpanda -Le nkonzo inika iikhomishini kubasebenzisi abathumela abanye abathengi.
Zonke ezi mveliso zahlulwe zazimbini: Iplatfom yeBitpanda kunye neBitpanda Exchange.
Iimpahla zeNkxaso yeBitpanda
IBitpanda ixhasa ngaphezulu kweempahla ezingama-30 zedijithali. Oku kubandakanya iBitcoin, i-Ethereum, i-NEO, i-Ethereum Classic, iTezos, kunye neRipple phakathi kwabanye. Ikwabonelela ngeesinyithi ezixabisekileyo ezinjengegolide, ipalladium, kunye neplatinum. Ukongeza, ezinye iinkonzo ezifana nokonga kunye nokuhlawula kuvumela abasebenzisi ukuba basebenzise ii-fiat currencies ezinje nge-USD, ibalaseleyo, kunye ne-euro.
Ngubani onokusebenzisa iBitpanda?
IBitpanda liqonga lezemali ledijithali. Izibonelelo zeasethi yedijithali kukuba zigqithisile. Bavumela abantu abavela kuwo onke amazwe ukuba bathengise. Ngenxa yoko, iBitpanda ayijongananga nezithintelo ezijongana nezinye iinkampani zezezimali ze-fiat. Abasebenzisi abavela kwihlabathi liphela-ngaphandle kwe-US-banokwenza iakhawunti ngeBitpanda kwaye baqale ukwenza izinto. Nangona kunjalo, bonke abasebenzisi kufuneka baqinisekise iiakhawunti zabo.
Ixabiso le-Bitpanda Ecosystem Token ngexabiso lotshintshiselwano kwanamhlanje.
I-Bitpanda Ecosystem Token ngumqondiso oqulunqwe yiBitpanda. Inkampani iqhube umnikelo wokuqala wotshintshiselwano ophakamise ngaphezulu kwe-43 yezigidi zeerandi. Ngokubhalwa, eyona ithokheni ixabise ngaphezulu kwe-27 yezigidi zeerandi. Kungenxa yokuba ixabiso lihlala liguquka ngenxa yemfuno kunye nonikezelo.
Isifundo: Ungabhalisa njani kwaye urhwebe iBitpanda
Inkqubo yokutyikitya kwiBitpanda ilula kwaye inokwenziwa kwiwebhusayithi kunye neeapps zayo ezihambayo. Kwiphepha lasekhaya, kuya kufuneka ucofe ikhonkco lokuQala ngoku. Eli khonkco liza kukusa kwiphepha elibhalisayo, apho uya kucelwa ukuba ugcwalise iinkcukacha zakho kwaye wamkele imigaqo nemiqathango. Emva kokuba uyamkele le migaqo, kuyakufuneka uqinisekise ngedilesi ye-imeyile. Le yinkqubo yesiqhelo apho ucofa iqhosha okanye ikhonkco ethunyelwe kuwe.
Kuya kubakho iinketho ezimbini ngalo lonke ixesha ungena. Uya kudinga ukukhetha iakhawunti apho ufuna ukungena khona. Unokukhetha nokuba liqonga leBitpanda okanye iTshintshiselwano. Oku kuboniswe ngezantsi.
Kukho umahluko phakathi kweQonga kunye noTshintshiselwano lweHlabathi. Kuseqongeni apho uza kufumana iipaji zakho ezenza ukuba ugcine kwaye uthumele imali. Unokuklikha kwizipaji ukubona iibhalansi zakho. Ikhonkco lamaxabiso liya kukubonisa amaxabiso azo zonke iiasethi. Oku kulandelayo kubonisa indlela iqonga elibukeka ngayo.
Utshintshiselwano lweBitpanda Global
I-Bitpanda Global Exchange liqonga elikwenza ukuba urhwebe kwii-cryptocurrensets nakwizinyithi ezixabisekileyo. Ideshibhodi yokutshintshiselana iboniswa kumfanekiso apha ngezantsi.
Ukubhalisa akwanele ngaphandle kokuba iakhawunti yakho iqinisekiswe. Ukuqinisekiswa kubalulekile kuba kuyanceda inkampani ukuba isebenze ngaphakathi komthetho. Iyanceda ekwazeni umthengi wakho (i-KYC) kunye nokuchasana nemali ngokungekho semthethweni (AML). Oku kuyimfuneko kubo bonke abalawuli.
Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, inyathelo lokuqala lokuqinisekisa iakhawunti yakho kukucofa ikhonkco elithunyelwa kwidilesi yemeyile yakho. Inyathelo elilandelayo kulapho ungenisa khona umfanekiso, ikhadi lesazisi okanye ipasipoti, kunye nobungqina bokuhlala kwakho. Le yokugqibela inokuba li-akhawunti eluncedo enedilesi yakho. Emva kokuba ungenise konke oku, ngoku ungaqhubeka nokufaka imali kwaye uqale ukurhweba. Inkqubo yokuqinisekisa ithatha ngaphantsi kweeyure ezimbini.
Emva kokuba ugqibe ukubhalisa, kuya kufuneka ufake imali kwiakhawunti yakho. Inkampani yamkela iidiphozithi kwi-US dollar, i-euro, i-Swiss franc, kunye ne-sterling. Unokufaka imali yakho usebenzisa i-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin kunye ne-Ethereum.
IBitpanda yamkela idiphozithi ngeendlela ezininzi. Oku kubandakanya ukutsalwa kwemali kunye namakhadi etyala asebenzisa iVisa kunye neMastercard. Ikwamkela izipaji ezinje ngeNeteller, iSkrill, iZimpler, kunye neSofort. Kwakhona yamkela iidipozithi ngqo. Ukongeza, unokufaka imali usebenzisa iBitpanda To Go, efumaneka kwiindawo ezingaphezu kwe-400 e-Austria. Zonke ezi ndawo zinokufumaneka kwiidipozithi ze-euro. Izinketho zedipozithi yedola yiSkrill, iVisa, kunye neMastercard. Izinketho zeSwitzerland franc zii-SEPA, iSofort, iNeteller, iSkrill, iVisa kunye neMastercard. Izinketho zeSterling deposit zii-SEPA, iNeteller, iSkrill, iVisa kunye neMastercard.
Njengomthengi weBitpanda, unokuyikhupha ngokulula imali. Ukufezekisa oku ngokunqakraza ukurhoxa kwiakhawunti yakho. Kuya kufuneka ukhethe isixa semali ofuna ukusikhupha kunye nenketho ofuna ukuyisebenzisa. Ungarhoxisa imali usebenzisa iindlela ezifanayo zedipozithi esele sizikhankanyile ngasentla.
Imirhumo yoGcino lweBitpanda
Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, iBitpanda ikwajongana nezinyithi ezixabisekileyo. Ezi zinyithi zigcinwa kwindawo ekhuselekileyo eSwitzerland. Ukugcina isinyithi kubiza imali. Kananjalo, inkampani ihlawulisa abanini bale mali yesinyithi. Umrhumo weveki ngegolide u-0.0125% lo gama owesilivere ingu-0.0250%. I-palladium kunye neplatinum yi-0.0250%.
Ungathengisa njani usebenzisa iBitpanda
Emva kokuba ufake imali kwiakhawunti yakho, unokurhweba usebenzisa iqonga leGlobal Exchange eboniswe ngezantsi.
Inyathelo lokuqala kukukhetha imakethi ofuna ukuthengisa kuyo. Icandelo lentengiso libonakalisiwe ngombala obomvu apha ngasentla. Xa ulidiliza eli candelo, uya kubona zonke izixhobo ezinokuthengiswa ezikhoyo.
Emva kokukhetha isibini semali ofuna ukusithengisa, kubalulekile ukuba uqhube uhlalutyo lobuchwephesha. Ukwenza oku usebenzisa izixhobo eziqaqanjiswe kumhlophe apha ngasentla. Apha, unokuhlengahlengisa uhlobo lwetshathi, usebenzise izikhombisi zobuchwephesha, kwaye wenze zonke iintlobo zohlalutyo.
Olu hlalutyo luyakunceda wazi uhlobo lorhwebo ofuna ukulubeka. Uqala urhwebo kwicala lasekhohlo eliqaqanjiswe mthubi. Kweli candelo, ukhetha uhlobo lwentengiso oyifunayo. Oku kunokuba ngumyalelo weemarike ojonga ixabiso langoku okanye umda okanye umyalelo wokumisa. Ezi zimbini zokugqibela zi-odolo ezibekwa kusetyenziswa amaxabiso exesha elizayo. Emva koko ukhethe isixa semali ofuna ukusithengisa kwaye ubeke iodolo. Njengoko usenza oku, unokubona ukuba abanye abathengisi bathengisa njani besebenzisa i-odolo yencwadi yencwadi. Le thebhu ibonakalisiwe kumfusa we-inn.
Okokugqibela, emva kokuba uyivulile intengiso yakho, ungakhangela ukuba baqhuba njani na kwii-odolo zam. Le thebhu iboniswe ngombala oluhlaza apha ngezantsi.
Uyisebenzisa njani iBitpanda Pay
Intlawulo yeBitpanda yinkonzo ekuvumela ukuba uhlawule amatyala kwaye uthumele imali ngokufanelekileyo kwabanye abantu. Inkqubo yokusebenzisa le nkonzo kulula kakhulu. Okokuqala, ndwendwela iwebhusayithi Intlawulo yeBitpanda ukhetho. Uya kubona ukhetho lokusayina ukuba eli lixesha lokuqala. Emva kokuba ubhalisile, kuya kufuneka ukhethe iBitpanda Platform ukhetho. Ukuba unayo imali kwiakhawunti yakho, kuya kufuneka ukhethe u-Thumela uKhetho kwaye ufake iinkcukacha zomamkeli.
Uyisebenzisa kanjani iSicwangciso sokuGcina iBitpanda
Isicwangciso sokuLondolozwa kweBitpanda lukhetho olwenza ukuba ugcine imali. Ungazigcina ezi mali kwi-fiat okanye kwi-cryptocurrency. KwiQonga leBitpanda, uya kufumana iPortal yokonga njengoko kubonisiwe ngezantsi. Kuya kufuneka uqale ngokongeza isicwangciso esitsha. Ngokwenza oku, iqonga liza kuthengela ngokuzenzekelayo i-crypto.
Khu seleko no Khu seleko
Ukhuseleko kunye nokukhuseleka kubaluleke kakhulu kubo bonke abantu ababandakanyekayo kwimveliso ye-crypto. Kubalulekile. IBitpanda, yenye yezona nkampani zixhaswa ngezimali zase-Austrian fintech ibeke amanyathelo okuphucula ezi zinto zimbini. Iwebhusayithi kunye neeapps zinempawu zokhuselo. Xa ubhalisa, iqonga lenkampani liya kukuxelela ngokuzenzekelayo ukuba iphasiwedi yakho yomelele ngokwaneleyo.
Enye into. Inkampani inokukhetha ukungqinisisa izinto ezimbini. Oku kukuvumela ukuba ufake ikhowudi eyimfihlo ethunyelwe kwidilesi yemeyile yakho okanye inombolo yefowuni ukufikelela kwiakhawunti yakho. Ngalesi siqinisekiso, kuye kube nzima kakhulu ukuba izinto zangaphandle zingene kwiakhawunti yakho.
IBitpanda yinkampani yaseAustria. Ilawulwa nguGunyaziwe weNtengiso yezeMali wase-Austrian. Yile arhente ikwanike inkampani ilayisensi yomnikezeli wentlawulo ngokungqinelana nomthetho weNkonzo yeNtlawulo 2 (PSD2). Inkampani iphinda iqinisekise abasebenzisi bayo njengoko kuchaziwe apha ngasentla.
IBitpanda yenze ifayile ye- elikwisikolo efundisa abafundi ngakumbi malunga nee-cryptocurrensets. Iiklasi zahlulwe zantathu. Iiklasi zabaqalayo zilungiselelwe abantu abaqala ngee-cryptocurrensets. Iiklasi eziphakathi kwelinye icala zezabo "baphumeleleyo" kwiiklasi zokuqala. Iiklasi zeNgcali zilungiselelwe abo badlulela phambili ukusuka kwiiklasi eziphakathi. Ezi klasi ikakhulu zisekwe kwisicatshulwa kunye neevidiyo ezithile. Ukuba neeklasi kuyinto elungileyo kuba inika abathengisi ulwazi abaludingayo ukuze babe ngabarhwebi abangcono.
Inkonzo yaBathengi yeBitpanda
IBitpanda inamava anamhlanje enkonzo yabathengi. Abasebenzisi banokunxibelelana ngokulula nenkampani ngeqhosha labo lengxoxo elifumaneka kwiwebhusayithi. Iqhosha loncedo linika abasebenzisi iimpendulo kwimibuzo eqhelekileyo. Abasebenzisi banokungenisa izicelo kwi eli phepha. Nangona kunjalo, iBitpanda ayibonelelanga ngenombolo yefowuni.
Iwebhusayithi yeBitpanda: www.nmokanda.com
IBitpanda Twitter: https://twitter.com/bitpanda
IBitpanda Facebook: https://www.facebook.com/BITPANDA
IBitpanda Inxibelelaniswe: https://www.linkedin.com/company/bitpanda/
Uhlelo lokusebenza lweBitpanda Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitpanda.bitpanda&referrer=utm_source%3Dwebsite%26utm_medium%3Dplaystorebtn
IBitpanda iOS: https://apps.apple.com/at/app/bitpanda-buy-bitcoin-crypto/id1449018960